Izithako ezi-4 zezimonyo ezilwa nemibimbi kanye nemijovo yobuhle - Ubuhle 2022
Izithako ezi-4 zezimonyo ezilwa nemibimbi kanye nemijovo yobuhle
Imijovo yobuhle sekuyinsakavukela kwabaningi bethu njengokuya konobuhle. Nokho, uma ngesizathu esithile ungakakulungeli ukusebenzisa inaliti, ungadangali.
Ungagcina ubusha ngaphandle kwemijovo. Into esemqoka ukuqonda ukuthi yiziphi izingxenye okufanele zibe ekubunjweni kwezimonyo zakho (kungaba ukhilimu noma i-serum). Sikhuluma ngokulandelayo.
I-snail mucin (umnenke) inomphumela omangalisayo wokuvuselela futhi yenza isikhumba sibukeke sisisha futhi imibimbi ingajulile kangako.
Akukhona lutho ukuthi le ngxenye isetshenziswa ngenkuthalo ngamantombazane aseKorea, avame ukubukeka emncane kakhulu kuneminyaka yawo yangempela. Bheka i-mucin kuma-creams nama-serum - ingaba kokubili isithako esiyinhloko somkhiqizo kanye nesisizi.
I-Matrixyl (i-Palmitoyl pentapeptide-4) iyi-peptide ekhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen ne-hyaluronic acid. Kodwa isikhumba sobusha asinakwenzeka ngaphandle kwalezi zingxenye ezimbili ezibalulekile zesikhumba.
I-Matrixil ingathengiswa kokubili ngendlela ehlanzekile futhi njengengxenye yokhilimu - qiniseka ukuthi uzama zombili izinketho ukuze uqonde ukuthi iyiphi esebenza kangcono esikhumbeni sakho.
I-Argireline ivame ukubizwa ngokuthi i-analogue ye-Botox, njengoba ingqikithi yesenzo sayo ifana kakhulu. Le peptide iphumuza imisipha futhi ilwe ngokuphumelelayo nemigqa yokukhuluma. I-Argireline inomphumela okhulayo kanye nomphumela osheshayo.
Into esemqoka ukusebenzisa le peptide esifundweni ukuze ungabi umlutha esikhumbeni.
Okubalulekile: ngaphambi kokusebenzisa ama-peptide ekunakekelweni kwasekhaya, qiniseka ukuthi uthintana no-beautician wakho.
I-Vitamin C ilwa ngokuphumelelayo nezimpawu zokuqala zokuguga, iqabula isikhumba, inciphisa amabala eminyaka futhi ithuthukise umbala. Ngakho-ke ungesabi ukuyisebenzisa kuma-serum asebenzayo.
Uzobona umphumela wokusetshenziswa kwevithamini C ezinsukwini ezingama-5-7. Futhi, yebo, i-vitamin C ivikela isikhumba elangeni, ngakho ingasetshenziswa unyaka wonke.
Izoba yini imfashini yesikole ekwindla-ebusika 21/22: ubukhulu obukhulu kanye ne-unisex yentsha
ICoronavirus kanye ne-neurology: amaqiniso athakazelisayo okufanele uwazi ngokuqinisekile
Ngemuva konyaka kuqubuke ubhubhane lwe-coronavirus, ososayensi basafunda ukuthi lesi sifo singakwazi ukwenzani. Izimpawu ze-neurological ze-COVID-19 zihlanganisa unhlangothi, i-encephalitis, ne-neuropathy. Indlela yokuzivikela - kusho udokotela wezinzwa u-Ekaterina Yatsenko
Izivivinyo ezi-3 ezilula zezinqe eziqinile ongazenza ekhaya
Ukuzivocavoca ama-buttocks ekhaya kumantombazane kulula kakhulu futhi kuyasebenza. Funda indaba yethu yokuthi ungampompa kanjani izinqe zakho ekhaya ngokushesha futhi kalula